यी ४ राशिलाई मिल्नेछ सबैभन्दा ठुलो सफलता, तपाइँको राशी त परेन ? | सुदुरपश्चिम खबर
राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ । कुम्भ राशि भएका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका साथी उत्तम मानिन्छ ।
यिनीहरूका बीचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि कुम्भ हो भने मेष, सिंह या धनु राशिका साथी छनौट गरे यी साथीको जोडी सामान्य रहने छ । जुन मानिसको राशि कुम्भ हो उनको लागि कर्कट वृश्चिक या मीन राशिका व्यक्तिका साथ प्रेमसम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० प्रतिशत हुन्छ ।
कुम्भ राशिका लागि वृष, कन्या या मकर राशि हुनेहहरुको सम्बन्ध राम्रो मानिएको छैन । ज्योतिषशास्त्रीका अनुसार हरेक व्यक्तिको जीवनमा खुशी र प्रगतीमा ग्रहको राशिमा हुने प्रभावमा निर्भर हुने बताउछन् । जसले गर्दा राहुकेतुलाई शास्त्रमा निकै महत्वकासाथ हेरिन्छ । त्यसैले ९ वर्ष पछि राहूकेतुले यी ४ राशिलाई छोडेर जादैछ । यदि तपाईको राशी परेको छ भने हेर्नुस् । मिल्नेछ जीवनकै सबैभन्दा ठुलो सफलता । कुन कुन हुन् ती राशीहरु ?
कर्कट राशिः यो राशी हुनेहरुको लागी पनि राहु केतुको नराम्रो प्रभाव हटेर जाने भएकाले निकै शुभ समय रहेको छ । जसले गर्दा अड्किएका कामहरु बन्नेछ । प्रशस्त आर्थिक लाभ हुने र अध्ययनमा सफलता हात पर्नेछ ।
सिंह राशिः यो राशीहुनेहरुको लागी पनि राहुको प्रभाव छोडेकाले जीवनकै ठुलो सफलता मिल्नेछ । जसको प्रभाव प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सफलता मिल्नुका साथै धन लाभ पनि हुनेछ । त्यस्तै नयाँ जागिरका अवसरहरु मिल्नेछ ।
मकर राशीः मकर राशी हुनेहरुको लागी पनि अबको समय निकै राम्रो रहेको छ । चिताएका र अडकिएका कामहरु बन्नेछ । साथै आर्थिक लाभ पनि हुनेछ । र वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ ।
वृश्चिक राशिः यो राशी हुनेहरुको लागी पनि राहुको प्रभाव हट्ने भएकाले अति शुभ समय रहेको छ । त्यसैले यो राशीलाई मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढनेछ । परिवारमा सुख , शान्ति छाउनेछ । साथै रोकिएका कामहरु बनी आर्थिक लाभ हुनेछ । नयाँ पुस्ता बाट सभार